Maitiro ekusefa maemail muIOS 10 ye iPhone uye iPad | IPhone nhau
Maitiro ekusefa maemail muIOS 10 ye iPhone nePad
Ini pachangu, ini ndiri mushandisi anofarira kuve neyake email inbox zvakanaka "yakachena". Kuti ndikwanise kuita izvi, chimwe chezvinhu zvandinoita kupatsanura maemail mune maakaundi akasiyana, senge ari ega, basa uye nevamwe kudzivirira kugamuchira spam mune maviri ekutanga. Kana iwe usingade nzira yandinobata nayo tsamba yangu uye zvese zvaunoda kuti uone chete iwo aunoda pane imwe nguva, iwe unofanirwa kuziva kuti Tsamba inotitendera Sefa maemail nekukurumidza uye nyore.
Iyi ficha yaive yatovepo mushanduro dzakapfuura dzeIOS. Chii icho nyowani ndiyo «bhatani» icon kusefa maemail, iye zvino ave mitsara mitatu kunge fanera mukati medenderedzwa, ese akafanana iwo mavara ebhuruu. Sezvaungave iwe watofungidzira, chakavanzika chekusefa maemail muMeil yeIOS chinotanga nekiyi bhatani. Isu tinokudzidzisa iwe kuti ungashandise sei.
Kuchenesa maemail muMail kuri nyore kwazvo
Kana isu tikabata pane bhatani kusefa maemail, nekutadza inotiratidza chete izvo zvisina kuverenga. Ko kana iyi isiri iyo nzira yatinoda kuona maemail? Eya, Mail inotipa zvimwe sarudzo, asi kuti tiwane iwo isu tichafanira bata pane chinyorwa icho chinoti «chisina kuverengwa» mubhuruu pasi pechidzitiro. Tinogona kusefa na:
Izvo zvataurwa zvisina Kuverengwa.
Inotarisirwa kwatiri (kwandiri).
Neni mukopi (mu "cc").
Chete kubva kuVIP runyorwa.
Kana tichida, tinogona kushandisa inopfuura firita imwe chete panguva imwe chete. Semuenzaniso, tinogona kusarudza izvo zvisina kuverengwa uye izvo zvine chiratidzo, kana izvo zvine chiratidzo uye zvine isu mukopi. Nenzira iyi, sarudzo dzinotibvumira kuti tiwane chaicho email (s) yatiri kutsvaga.
Iye zvino hauna chikonzero chekusawana iwo mupanduki mutumwa anovanda kwauri, handiti?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekusefa maemail muIOS 10 ye iPhone nePad
IOS 10 Meseji: Mashandisiro Ekushandisa Bubbles uye Hupenyu Hwakapfuura